Dhambaal Side: Dalxiiska magaalada taariikhiga Seylac & Jasiirada Sacaadadiin – Guban Media
November 27, 2017 November 29, 2017 Ali Mohamed 724 Views 0 Comments
Seylac:magaalo taariikhi ah
Seylac waa magaalo leh taariikh gabowday oo ilaa qarniyo hore la dagenaa, haatana waa magaalo madaxda gobolka Salal. Waxey dhacdaa Waqooyi Galbeed Soomaliland, Waa magaalo ay baddu kaga hareeraysantay dhinacyo badan waa meelaha ay aadka iskaga dhaw yihiin Djabuti & Somaliland. Seylac waxa loosii maraa wadooyin adag oo aan dhisnayn taasi ayaa keentay in ay noqoto meel go,doon ah.
Haddii Hargeysa laga baxayo waxa jira dhawr waddo oo loosii maro marka loo jihaysan yahey Seylac. waxa ka mid ah wadada ka baxda waqooyiga magaalada Hargeysa ee sii marta Dawga Cad iyo Dawga Camuud halkaas oo marka xeebta la gaadho dhinaca galbeed loo wareegayo waana wadada ugu sahlan. dhanka kale waxa jirta wado ka baxda Galbeedka Hargeysa taasi oo lasii maro magaalada Boorama halkaasna looga laabto dhanka waqooyi, deedna lasii maro dariiqyo kala gadisan.
Marka aad ka baxdo galbeedka magaalada Hargeysa waxa aad sii maraysaa Abaarso, Arabsiyo, Gabiley, Kala beydh, Dilla, Tulli, Shirwac, Gorayo cawl, Boorama, Quljeed, Boon, Fadhi Xun, Fardo lagu xidh, Geerisa, Ceel-Gaal, Caasha Caddo, Tokhoshi dabadeedna Seylac masaafada ay isku jiraan Hargeysa & Seylac qiyaas ahaan waxa weeyaan 388 KM marka lasii maro jidkan aynu hada soo sheegnay, masaafadaa u dhaxeysa ayaaba cajaa,ib ah buuraha waaweyn ee laga gudbayo, banka iyo banaanada, dooxyada, xayaawaanka iyo abuuraha Illahey ee badan.
Seylac madaama oo ay ka mid tahey magaalooyinka ay Soomalidu degto kuwooda ku teedsan Xeebta waxa ka muuqda ilbaxnimooyin iyo taariikho wakhtiyo fog laga joogo waxa ka mid ah Masjidka Qiblateynka oo ah Masjid leh laba qiblo mid u jeeda masjidul Aqsa oo ahaa halkii loo tukan jirey intii aaney soo bixin diinta Islaamku iyo qiblada labaad oo ah ta u jeeda dhanka Xaramka oo ah jihadii kama danbeysta aheyd ee uu jideeyay Illahey (SW). waxa la aamin sanyahay in ay Seylac tahey meelihii u horeeyay ee uu islaamku gaadhey Afrika, ka sakow barriga dhexe.
Seylac waxa ay leedahay Dugsi Hoose Dhexe iyo Sare oo lagu macaabo Sacaadadiin . sidoo kalena waxa ku yaal dhisme loogu talo galey in ay ardeyda u hoydaan (Boarding).
Somaliland waxa ku yaala jasiirada dhawr ah waxana ugu caansan baaxad ahaana inta la ogyahay ugu weyn jaziirada Sacaadadiin taasi oo u jirta Seylac Seylac masaafo siximada amaba laashku u soconayo ilaa 20 daqiiqo , Jasiirada Sacaadadiin waa meel aad u qurux badan waxa ay caan ku tahey Geedka loo yaqaano Qandal oo ah geed aad u cagaaran oo soo jiidasho leh isla markaan aan is badelin gu, iyo jilaalba. waxa dhex mara gacan ay biyihiisu aad u degan yihiin.
← Ethiopia says ethnic clashes kill more than 20 in past week
President-elect Bihi acknowledges challenges ahead →